Barkhad Jaamac Batuun murashaxnimadiisu waa imtixaan
Monday 24th May 2021 07:20:13 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Waan hubaa aragtida iyo dareenka aan ka qabo murashax Barkhad Jaamac Batuun in la i la wada qabo.
Ninkani boqol siyood iyo boqol sababood buu u gu habboon yahay in loo doorto kaalimaha sare ee hoggaaminta dalka. Inta se aan maalin kale iyo madaxweyne la gaadhin, in maanta loo doorto xildhibaan Golaha Wakiillada ah waxaa ku jirta guul ummadeed oo aad u weyn dhinacyo badanna leh.
1. Waa nin qofnimadiisu dhisan tahay, lehna astaamaha hoggaamiyaha iyo isbeddelka, taana waa la wada qirsan yahay.
2. Waa nin is ku soo saaray karti iyo adayg xilli bulshadiisu tahay cunsuri oo isaga iyo qoladiisa madaxa la ga ga taagan yahay.
3. Waa nin muujiyay in uu siyaasadda ka lee yahay ujeeddo weyn iyo isbeddel bulsheed, murashixiinta kale oo dhanna ka ga duwan in uu yahay halgamaa aan ka dhicin Maraykankii Malcom X iyo Martin Luther.
4. Barkhad Jaamac haddii uu gaadho xildhibaan iyo kaalimaha sare ee siyaasadda dalka wax ay han iyo himilo galinaysaa kumanyaalka dhallinyarada ah ee beeshiisa oo maanta aaminsan in aanay dalka xaq ku lahayn waxbana ka noqon karin.
5. Doorashadiisu wax ay innaga goynaysaa fallaadh akhlaaqeed oo sambabka innaga taagan, waxayna innaga yara fududaynaysaa culayska dembiga weyn ee aynnu wadar ahaan ka dareenno takoorka iyo caddaalad xumada ay awowyadeen soo bilaabeen qarniyo fog iyo dulmiga xanuunka badan ee aynnu reerahaa ku haynno.
6. Qodobbada 4 iyo 5 waxaa ka dhalanaysa bulsho cusub oo nafsiyad ahaan fayow labada dhinacba, waxaana inoo bilaabanaya casri aynnu dhaqankii gaboobay iyo mugdigii ka baxaynno.
Reer Hargeysa in ay Barkhad Jaamac Batuun doortaan iyo in ay dooran waayaan, oo dhuguf waxmatare ah oo reerkooda ah ka raacaan, waa imtixaan. Waa imtixaan haddii la gu guulaysto ifafaale wanaagsan u noqonaya isbeddel bulsheed iyo ilbaxnimo. Sidaa darteed wax aan rajaynayaa Hargeysa oo caasimaddii ahi in ay isbeddelkaa tusaale u noqon doonto.
W/Q Ibraahim-Hawd Yuusuf.